Mauna Kea ugwu mgbawa: njirimara, mbido na mgbawa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 08/09/2021 18:40 | Geology
Anyị maara na na mbara ụwa anyị enwere ụdị ugwu mgbawa nwere njirimara pụrụ iche na ihe karịrị otu nwere ike iju anyị anya. Otu n'ime ha bụ iwu Mauna Kea. Ọ bụ ugwu kachasị elu na steeti Hawaii ma bụrụ ugwu mgbawa nke, ọ bụrụ na ewere ya site na ntọala ya dị ka mmalite, a na -ahụta oke ugwu kacha elu n'ụwa. Ọ bụrụ na anyị agụọ ya ebe a, ọ karịrị ugwu Everest.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị njirimara, mbido na mgbawa ugwu ugwu Mauna Kea.
2 Ọkpụkpụ ọkụ ọkụ Mauna Kea
3 Mauna Kea na -agbawa
Aha Mauna Kea sitere na Hawaii wee pụta ugwu ọcha. Ọ bụ otu n'ime ugwu mgbawa kacha ochie mejupụtara agwaetiti a. Ọ bụ nke anọ kacha ochie nke ụmụ amaala Hawaii weere na ọ bụ ugwu mgbawa dị nsọ. Ọ bụ ugwu mgbawa ebe ị nwere ike ịhụ nnukwu ihe dị ndụ na ihe dị ndụ na gburugburu ebe obibi nke ahịhịa ahịhịa na ụmụ anụmanụ, yabụ, ọ nwere nnukwu ọdịbendị na mkpa eke. A na -ahụta ya dị ka ebe mgbaba maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị mpaghara yana ọ bụghị naanị na Hawaii, kamakwa n'ụwa niile.
Otu ihe na -achọ ịmata nke ugwu mgbawa Mauna Kea pụtara maka bụ na o nwere elu dị elu karịa Ugwu Everest. A na -ewere ya dị ka ugwu mgbawa kacha elu n'ụwa ma ọ bụrụhaala na agụta ịdị elu ya site na ntọala ya.
A na -ekewa ya dị ka ugwu mgbawa. Ọ dị na mpaghara etiti etiti agwaetiti dị n'etiti Oke Osimiri Pasifik. Ọtụtụ n'ime oke ya ka dị n'okpuru mmiri, ọ bụ ya mere a na -akpọkarị Ugwu Everest nke kachasị elu. Site na ala ruo n'ọnụ ọnụ oke osimiri, ọ dị elu karịa mita 9.000, mana amabeghị ọnụ ọgụgụ ya. A na -eme atụmatụ na ịdị elu ya dị n'agbata mita 9.330 na 9.966, ma ọ bụ karịa karịa mita 10.000. Dị ka United States Geological Survey si kwuo, ọ dị mita 4.205 karịa oke osimiri. Olu ya dị ihe dịka puku kilomita atọ na narị abụọ.
Ọ bụ ugwu mgbawa yiri ọta nke elu ugwu kpuchiri na snow. Ee, ọ bụ ezie na Hawaii abụghị ebe metụtara oyi, Mauna Kea nwere mpempe ice na, n'oge ọnwa oyi, ọ na -edekọ mmiri ozuzo (ya mere aha ahụ). Njirimara ndị a na -eme ka ọ bụrụ ebe a ma ama maka omume egwuregwu dị ka ski na snowboarding. N'ihi ịdị elu ya, odida obodo, ikuku dị ọcha na ịdị anya site na nnukwu obodo, awụnyere telescopes na ebe nleba anya.
Ọkpụkpụ ọkụ ọkụ Mauna Kea
Anyị na -ekwu maka ugwu mgbawa nke nwere ike iteta n'oge ọ bụla. Ma ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugwu mgbawa niile na -adịghị arụ ọrụ nwere ike teta n'oge ọ bụla wee banye usoro mgbawa ọzọ.
A na -eme atụmatụ Mauna Kea ihe dị ka nde afọ 1. Ebe ọ bụ ugwu mgbawa, ọ na -akpụpụta ya kpamkpam site na nchịkọta ọtụtụ akwa mmiri dị larịị, na -awụsa n'akụkụ niile, na -akpụpụta mkpọda dị nro na ọdịdị sara mbara. Agbanyeghị, lava na nke a na -adị oke egwu ma na -etolite mkpọda dị warara. Kpọsị, a na -ekwu na ọ nọ n'ọnọdụ nkwado n'ihi na ọ banyela n'oge mgbanwe, ọrụ mgbawa ya belatara karịa afọ 400 gara aga. Agbanyeghị, dị ka ugwu mgbawa ọ bụla, ọ nwere ike teta n'oge ọ bụla.
Isi mmalite ya bụ ebe dị ọkụ na Hawaii, mpaghara nwere nnukwu ugwu mgbawa. Efere Pacific na -agafe ebe a, ebe magma nke ihe mejupụtara basaltic na -ebili, na -ebibi ihe dị n'oké osimiri wee pụta dị ka mmiri n'oge mgbawa. N'echiche a, Mauna Kea malitere dị ka ugwu mgbawa dị n'okpuru mmiri, ruo mgbe akwa mmiri na -agbapụta na -aga n'ihu jikọtara ya wee nye ya ọdịdị ya ugbu a. E wuru ọtụtụ ihe owuwu ya na Pleistocene.
Mmemme mkpuchi ọta malitere ihe karịrị afọ 60,000 gara aga; ruo afọ 300,000, emesịa ọ malitere ịwụsa basalt alkaline.
Mauna Kea na -agbawa
Oge ikpeazụ Mauna Kea gbawara bụ afọ 4.500-4.600 gara aga. Ọ na -arụsi ọrụ ike n'ọkwa ọta ihe dị ka afọ 500.000 gara aga, na mgbe o rutere n'ọkwa azụ azụ, ọrụ ahụ bịara dị jụụ ruo mgbe ọ ghọrọ ugwu mgbawa na -adịghị ala ala.
Enwere okwu ole na ole ekwenyela na mgbawa akụkọ ihe mere eme; ya bụ, ihe dị ka isii, ihe a niile mere tupu Oge Anyị. N'ihe dị ka puku afọ anọ na puku isii gara aga, ọ nwere ike ịbụ na oghere ikuku gbawara ma na-anọchite anya ụfọdụ mgbawa na nso nso a. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihe omume ikpeazụ a mepụtara ọtụtụ cones na windo cinder n'akụkụ ugwu na ndịda n'akụkụ ụfọdụ na Holocene.
Mauna Kea bụ otu n'ime ọkụ ọkụ na -ekpo ọkụ ise nke mejupụtara Big Island nke Hawaii ma bụrụ agwaetiti kacha ibu na ọdụdụ na Emperor Seamount Chain. N'elu nzuko ya, ugwu mgbawa Mauna Kea abụghị caldera a na -ahụ anya, mana a usoro nke cones esịnede ntụ na pumice nkume. Enwere ike iche na enwere ugwu mgbawa n'elu ugwu ahụ, nke sedimenti kpuchiri site na mgbawa ugwu na -esote.
Ugwu ọkụ ọkụ Mauna Kea nwere oke ihe karịrị square kilomita 3,200 na oke ya dị ukwuu nke na, ya na Mauna Loa ugwu mgbawa gbara ya gburugburu, ọ kpatara nkụda mmụọ n'ime oke osimiri nke dị kilomita 6 n'ime ya. Mgbawa ugwu ahụ na -aga n'ihu na -amịda na na -agbada n'okpuru ya na -erughị 0,2 mm kwa afọ.
Mauna Kea bụ naanị ugwu mgbawa na Hawaii nwere glaciation siri ike, gụnyere ire glacial na glaciation. Ego nkwụnye ego yiri nke ahụ nwere ike ịdị na Mauna Loa, mana mmụba mmiri kpuchiri ihe nkwụnye ego ndị a. Ọ bụ ezie na Hawaii nọ n'oké ọhịa, ọdịda 1 ogo na okpomọkụ karịa afọ ice dị iche iche ọ na -ezuru idebe snow n'elu ugwu ahụ n'oge ọkọchị, si otú a na -akpụpụta mpempe akwụkwọ ice. Enweela glaciations atọ n'ime afọ 180.000 gara aga, nke a na -akpọ Ịhụnanya.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ugwu mgbawa Mauna Kea na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Mauna Kea